mairie-antananarivo – Famaranana ny AVCOI
Famaranana ny AVCOI
auteur 9 desambra 2016
Nisokatra sy nifarana omaly ihany ny fivoriana tsy ara-potoan’ ny Ranomasibe Indiana AVCOI izay notontosaina tao amin’ny Hotel Colbert. Tapaka fa any Moroni indray ny fivoriana manaraka ny faran’ny volana aprily na fiandohan’ny volana may 2017 izao, ny fivorian’ireo Tanàn-dehibe aty amin’ny faritry ny ranomasimbe Indiana. Noraisina mpikambana avy hatrany ireo Ben’ny Tanàna teto Madagasikara izay tonga nanatrika ny fihaonambe, ohatra amin’izany ny Foulpointe, Diego, Toliara, Faradofay,… sy ireo nandefa solontena.
Nambaran’ny filoha lefitran’ny Ben’ny tanana, Andriamatoa Julien Andriamorasata fa nisy ny fanovana ny “statut” ka nasiana ny “Coprésident” ary lany tamin’izany ny Ben’ny Tananan’ny Port Louis Maurice raha ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana kosa no Filoha amin’ny fitantanana ny fikambanana AVCOI.
Betsaka ny Ben’ny Tanàna tonga teto anatin’ny Ranomasibe Indiana izay misy Firenena 6 ary hita fa nizotra soamantsara ny dinika,nisy lohahevitra maro nodinihana mikasika ny “décentralisation” fizaram-pahefana, mikasika ny “décentralisation” fanapariam-pitondrana izay ilaina tokoa amin’ny fampandroasoana ny Kaominina.
Nodinihana ihany koa ny olana mahazo ny “Collectivité térritoriale” amin’ny ankapobeny ny Kaominina sy ireo “Grande Ville” ato amin’ny “Ocean Indien”, izay no mahatonga ry zareo miditra ao anatiny fikambana lehibe tahaka itony mba ahafahana miatrika ao anatin’ny tsy fahampiana; satria ny ankamaroan’ireo aty Afrika dia tsy manana fahaiza-manao iasana, ka izay no nidirana ao nohon’ny tsy fahafahana miasa irery, na ato anatiny izany na any ivelany ary koa ahafahana manao fifanakalozan-kevitra amin’ny traikefa efa misy. Izay no tena an’isany zava- dehibe ary ahafana mijery ihany koa ny famatsiam-bola.
Ny Fikambanana AVCOI sy ny AIMF ary ireo maro samihafa dia manana tanjona hiara- miasa amin’ny mpamantsy vola iraisam-pirenena.
Ny Vondrona Eropeana, ny banky iraisampirenena sy ireo mpamatsy vola hafa ary ireo fikambanana eran-tany no manasoa ny fikambanana ao aminy.
Maro ny tombontsoa azon’ny mpikambana, raha ny Antananarivo manokana no resahana dia efa misy ny tetik’asa maromaro efa mandeha, ohatra amin’izany ny ranofisotro madio,fanadiovana……efa misy ny “jumelage”. Eo ihany koa ireo fampiofanana azon’ ny kaominina amin’ny fizarana traikefa sy ny fahafahana mizara amin’ny hafa.